ပီတိ: လွမ်းနေတဲ့ မနက်စာများ
Posted by P.Ti at Thursday, September 11, 2008
အား နှိပ်စက်နေကြပါတယ်။ ငပိရည်နဲ. ထမင်းနဲ.နယ်ပြီး အကြေ်နဲ.စားချင်တယ်။ ပဲပြူတ်နဲ. ပလာ တာလဲ။စားချင်တယ်။ လက်ဘက်ရည် ကို မလိုင်နဲ.သောက် ချင်တယ်။ ဆူးပုပ်ရွက် လေး ကန်စွန်းရိုး နီ လေး တို.စားချင်တယ်။ အာ.း…………..စားချင်ပါတယ်။
အညာသားတွေ အညာကို လွမ်းနေကြတာ..
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ သွားရေတောင် ကျချင်လာတာ ကိုပီတိ ဘလောက်ရေကြီး သွားနိုင်တယ်။ ပုံရိပ်လည်း စားတော်ပဲ၊ ထမင်းကြော်နဲ့ အကြော်စုံဆို သိပ်ကြိုက်တာ။ သြော် ဒါနဲ့... ဘယ်သူက ကော်ဖီဖြတ်မယ် ပြောတုန်း။ ဖြတ်နိုင်ပေါင် :p။ ဇာတ်ကောင်က ဖြတ်တာလေ။
ဒီပို့စ်လဲဖတ်လို့ပြီးရော ဗိုက်တောင် တော်တော်ဆာသွားတယ်။ အားလုံး စားချင်စရာတွေချည်းဘဲ။ ဒါနဲ့ ကတ္တီပါ ပဲပြုတ်ဆိုတာ ဘာမျိုးလဲဟင်။ မသိလို့။
မုန့်ပျားသလက်အဖြူနဲ့ ဘယာကြော်လေး စားချင်လိုက်တာဗျာ..
ဟုတ်ပါ့ ပီတိရေ။ မနက်စာလွတ်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေလဲများပေါ့။ ပဲပြုတ်ကိုကြက်သွန်နီလေးနဲ့သုတ်၊ ငါးပိရေလေးနဲ့  ထမင်းကြမ်းလေးနဲ့စားချင်လိုက်တာ
အဲဒီ အကြော်ဗန်းပုံက ဘာလိုလုပ်ပြီးများ ရလာပါလိမ့်။ စာနဲ့တင်မဟုတ်၊ ပုံနဲ့ပါ နှိပ်စက်တော့တာကိုး။
အောင်မလေးလေး ... စားချင်လိုက်တာနော် ... ဖတ်ရင်း တံတွေးကို အခါခါမျိုချနေရတယ် ။
အမတို့ ခုနေတဲ့ မြို့မှာ ပဲပြုတ်က ကောင်းမှကောင်း။ မယုံရင် ဂျစ်ကိုမေးကြည့်...
ကိုပီတိရေ… အညာနံနက်စာလေးတွေ စုံနေတော့ ဟာနေတဲ့ ဗိုက်က အတော်ဒုက္ခပေးတယ်… မုန့် ပျားသလက်ကို လွမ်းလွန်းလို့အိမ်မှာ လုပ်စားဖြစ်တယ်… rice powder ကို အရည်ဖျော်ပြီးလုပ်တာ… ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်… အိုးကင်းက မကောင်းတော့ သိပ်မလှဘူး… ဒီတခါ လုပ်စားဖြစ်ရင် ဘလော့ဂ်ပေါ်တင်ပေးမယ်နော်… အကြော်စုံနဲ့ ကြက်သွန်နီလေးကိုက်ပြီး ထမင်းပူပူလေး စားရရင် အသားဟင်းတွေ လှည့်တောင် မကြည့်ချင်ဘူးနော်… ဟိုတနေ့ က Vivo သွားတော့ မလေးတွေရောင်းတဲ့ ပုဇွန်ဂွက်ကြော်တွေ့လိုက်တယ်…မြန်မာပြည်က အကြော်နဲ့ အတော်ဆင်တယ်… စားမယ်အားခဲပြီး မစားခဲ့ရဘူး… ပဲပြုတ်ကတော့ ပင်နင်းဆိုးလားက မပြတ်ဝယ်ထားတယ်… အိမ်နားလေးက Wet Market မှာ တခါတလေ ဇီးဖြူသီးရတယ်သိလား… ဒီလိုပဲ အစားထိုးရတာပေါ့လေ…
အား- မနက်စာတွေ- ဒီမှာလည်း လွမ်းမိ ပြီ။ ထမင်း ဖြူ ပဲပြုတ် ဆီစမ်း- အကြော်စုံ- ပြီးရင်..မြန်မာ့အသံက..နံနက်ချိန်ခါ တေးသံသာ လေး ဖွင့်- မိသားစု တွေ ရေနွေးကြမ်း အိုးနဲ့.. မနက်စာ စား ကြ။
ပီတိက..အ၀ယ်တော်ပဲ။ အိမ်မှာ..သားလိမ္မာလေး..ခိုင်းကောင်းတယ်ထင်တယ်။ အဟဲ..အမ ဆို..အဲဒါမျိုးလုံးဝ အားမကိုးရ။
တို့ဖက်မှာ- မနက်ဆို- တိုဖူးသုတ် -ထမင်းသုတ် လည်းစား တတ်တယ်။ ရေမုန့်ကျ တော့..ည လယ်စာ အဖြစ် စားကြတာများတယ်။ ည ၉ နာရီလောက်ဆို ရေမုန့်ဆိုင်မှာ တန်းစီ နေကြရော-
မခင်ဦးမေရေ.. နှိပ်စက်တာမဟုတ်ဘူး.. လွမ်းနေတာ...
ဟားဟား ပုံရိပ်ရေ... နောက်တခါရေကြီးဦးမယ်ထင်တယ်...
သိဘူးလေ.. ပုံရိပ်ရေးတာကောင်းတော့ ဇာတ်ကောင်နဲ့ပုံရိပ်ရောသွားတာလေ.. ဟဲဟဲ
သဉ္ဇာရေ... ကျွန်တော်လည်း ဗိုက်ဆာဆာရေးထားတာ။ ကတ္တီပါ ပဲပြုတ်ဆိုတာ ပဲနီပြုတ်ထားတာပါ။ အဲဒီပဲပြုတ်က နူးညံ့ပြီး အနီရောင်ရှိလို့ အဲလိုခေါ်တာထင်တယ်။
ဟုတ်ကဲ့ မဇနိ… မုန့်များသလက်အဖြူကို ငပိကြော်နဲ့စားရတာလည်းကောင်းတယ်နော်...
ဟုတ်တယ်မလင်း.. အဲလိုလေးစားရတာကိုက အရသာနော်...
နှိပ်စက်တာမဟုတ်ပါဘူး အမချိုသင်းရယ်.. အလွမ်းပြောပါ...စာနဲ့ပဲလွမ်းနိုင်လို့... :D
ဂျစ်တူးရေ... စားရမှာပေါ့... ဟိ
ဟုတ်လား ဂျစ်တူး မခင်မင်းဇော်ပြောတာ... အမရေ.. မယုံဘူး.. ဒီကိုပို့်လိုက်... :P
ဟုတ်တယ် မတန်ခူး ကျွန်တော်လည်း ပင်နီဆူလာရောက်ဖြစ်ရင် ၃ထုတ်ငါးကျပ်နဲ့ဝယ်ထားလေ့ရှိတယ်။ အခုတော့မရတော့ဘူး ဈေးတက်သွားပြီ။ ပြီးရင် အိမ်နားလေးက ပလာတာဝယ်ပြီး ပဲပလာတာ လုပ်စားတယ်လေ...
ဟုတ်တယ်မကေ... အမပြောလိုက်တော့မှ မနက်ခင်းလေးက ပိုပီပြင်သွားတယ်... အိမ်မှာဆို ကလေးပီပီ ဟန်ချီချီ ဆိုပြီး အပြင်မှာ သွားဝယ်တိုင်း ကျွန်တော့်ကိုပဲခိုင်းတာလေ... ကျွန်တော်တို့မြို့မှာတော့ မုန့်ပျားသက်၊ မုန့်စိမ်းပေါင်း၊ တွေကို ညလယ်စာအဖြစ်ရောင်းတယ်... လွမ်းစရာတွေကြီးပါပဲနော်....
လာပြီးလွမ်းကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
သတိရမိတယ်.."ရေမုန့်ဆိုလို့ ဘာများလဲမှတ်တယ်..မုန့်ရေတွေပါ့ရော.." တဲ့